China enamavili Umququzeleli zekhabhathi zomngundo Ukwenziwa kunye mveliso | IAojie Umngundo
Umququzeleli weKhabhathi yomSongi oSongelayo
IPhaneli loMnyango wePaneli
Okunye Izahlulo Ikubumbe
Agricultural Crate Umngundo
Auto Crate zomngundo
Beer Crate Umngundo
Olunye uMngundo weCrate
Ipeyinti yebhakethi yomngundo
Inaliti zeplastiki Inaliti M ...
Ukutya kwaBantwana nguSihlalo
Zeplastiki Inaliti Bathtub M ...
Umgqomo waBantwana waBantwana
Ikhabhathi yoMququzeleli enamavili ...
Ityesi yePlastiki yeKhabhathi yomngundo, iYunithi yodonga, iKhabhinethi yokugcina u-Ao Jie Mould angakuvuyela ukunika ikoteyishini kunye nenkonzo yakho. Amandla emveliso: Uyilo lomngundo, ukuzoba kunye nokwenza kungenziwa ngokomzobo we-2D, umzobo we-3D okanye isampulu eqinileyo.
IPlastiki yeDrawer Mold
Izinto Product PP, PC, PS, PE, DB, PVC, ABS, PMMA njl
I-Core kunye neCavity Steel 718H, P20, NAK80, 2316
Ubulukhuni bentsimbi: HRC28-33
Umngundo DME esemgangathweni
Inani leCavity lilodwa okanye lininzi
Inkqubo ye-Injection DIRECT GATE
Inkqubo ye-Ejector I-PIN EJECTOR
Ixesha lomjikelo 120S
Isixhobo esikhokelayo ixesha elingu-120DAYS
Ubomi beMold 500,000SHOTS
Uqinisekiso lomgangatho ISO9001
Inkonzo 4.Good Emva-kwentengiso
Ulawulo lomgangatho 5.Strict
6.Zonke izinto zokubumba zizenzekelayo / zihamba ngesandla.
Ukunika impendulo yexesha elifanelekileyo kwiileta, kwiminxeba okanye ngefeksi
In-ixesha unikezelo locaphulo kunye yoyilo sokubumbela
Unxibelelwano lwangexesha kwiindawo zobugcisa
Ngexesha lokuthumela imifanekiso yenkqubela phambili yokubumba kunye neshedyuli yokugqiba
Uvavanyo lwexesha kunye nokuhanjiswa kwesampula
Ukuhanjiswa kokubumba kwexesha.
Igama lebrand IAojie Umngundo
Indlela yokuBumba Inaliti Inaliti zomngundo
Izinto zeMveliso Iplastiki
Ukunyamezela i-CNC 0.003to 0.005mm
Izinto zoMxholo kunye neCavity P20, 718,2316 ...
Imbaleki idubule Imbaleki ebandayo okanye eshushu
Ubomi besikhunta Iimbumbulu ezingama-300.000-i-500.000 izithonga.
Ixesha lomjikelo 30-50
Ixesha lokuzisa Iintsuku ezingama-45-60
Iphakheji UMGANGATHO wetyala
Ubungakanani obahlukeneyo kunye nokumila ngokweemfuno zakho
Egqithileyo Ukugcinwa kwekhabhathi yekhabhathi
Okulandelayo: Plastic Toy Car Ikubumbe
Q: Zeziphi iinkonzo ozinikezelayo?
A: Sivelisa ukungunda ngenaliti yeplastiki kwaye sivelise iinxalenye zeplastikhi zokwenza isampulu kunye nemveliso eninzi.
Q: Ndingaqhagamshelana njani nawe?
A: Ungasithumela umbuzo nge-imeyile, i-WhatsApp, i-Skype okanye i-Wechat. Siya kuphendula kuwe ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Q: Ndingayifumana njani ikowuteshini?
A: Emva kokufumana i-RFQ yakho, siya kukuphendula kwisithuba seeyure ezi-2. Kwi-RFQ yakho, nceda unike olu lwazi kunye nedatha elandelayo ukuze sikuthumele amaxabiso okhuphiswano ngokusekwe kwiimfuno zakho.) 2D imizobo yenxalenye kwiPDF okanye kwifomathi yeJPG kunye nemizobo ye-3D kwi-UG, PRO / E, SOLIDWORKS, CATIA, I-CAD, STP, X_T, IGS, PRT, DWG, okanye i-DXFb) Ulwazi lwe-Resin (iDatasheet) c) Ubungakanani bemfuno yonyaka yamalungu
Q: Siya kwenza ntoni ukuba asinayo imizobo yenxalenye?
A: Ungasithumela iisampulu zakho zeplastiki okanye iifoto ezinemilinganiselo kwaye singakunika izisombululo zethu. Siza kudala.
Q: Ngaba singafumana iisampulu ngaphambi kokuveliswa kobuninzi?
A: Ewe, siya kukuthumela iisampulu zokuqinisekisa ngaphambi kokuqala kwemveliso eninzi.
Q: Ngenxa yomahluko wexesha ne China nakwamanye amazwe, ndingalufumana njani ulwazi malunga nenkqubela phambili yam kwi-odolo?
A: Veki nganye sithumela ingxelo yenkqubela phambili yemveliso kunye nemifanekiso yedijithali kunye neevidiyo ezibonisa inkqubela phambili yemveliso.
Q: Lithini ixesha lakho lokuhola?
A: Ixesha lethu eliqhelekileyo lokukhokelela kwimveliso yokubumba iiveki ezi-4.
A: 50% njengedipozithi yentlawulo, ibhalansi ye-50% iya kuhlawulwa ngaphambi kokuhambisa. Kwimali encinci, samkela i-Paypal, ikhomishini ye-Paypal iya kongezwa kwi-odolo. Kwimali enkulu, kukhethwa i-T / T
Q: njani ukuqinisekisa umgangatho wethu?
A: Ngexesha lokwenziwa kwesikhunta, senza izinto kunye nenxalenye yokuhlola. Ngexesha lokuvelisa, senza i-100% yovavanyo olupheleleyo lomgangatho
ngaphambi kokupakisha kunye nokulahla onke amalungu angangqinelaniyo nomgangatho wethu womgangatho okanye umgangatho ovunywe ngumthengi wethu.
Plastic Umngundo iKhabhinethi Baby
Iplastiki enkulu uMngundo iKhabhinethi
IPlastikhi yeKhabiniti yomngundo
Impahla yePlastiki yeMpahla
Isixhobo seplastikhi Umngundo weKhabhinethi